काश्मिरमा फेरि भयावह स्थिति !
एजेन्सी । पछिल्लो समय भारतले काश्मिरमा ठुलो संख्यामा आफ्ना सेनाहरु काश्मिर पठाएको छ । यसले दुई देशको सम्बन्ध थप बिग्रिने बताइएको छ । तीर्थ यात्रा गएको यात्रुहरु पनि ठुलो डरमा रहेको बताइएको छ ।
यसबारे प्रष्ट रुपमा भारतीय सरकारले केही बोलेको छैन । तर, काश्मिरमा पुनः रगतको खोला बग्न सक्ने अनुमान विश्लेषकहरुले गरिरहेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले काश्मिरका विषयमा अमेरिका भारत र पाकिस्तानको मध्यस्ताकर्ता भएर काम गर्न सक्ने बताइरहँदा यी दुई देशको तनाव फेरि बढ्ने हो कि भन्ने आकलन गरिएको छ ।
बितेका ६७ वर्षमा काश्मिरमा धेरै हिंसाका घटनाहरु भए । तर, आजको दिनसम्म पनि काश्मिरले शान्तिको सास फेर्न पाएको छैन । आज पनि उही विवाद चलेको छ काश्मिर कसकोः भारत वा पाकिस्तान, हिन्दु वा मुसलमानको ?
यसलाई बुझ्न इतिहासको केही पन्नाहरु पल्टाउनु पर्ने हुन्छ । सन् १९४७ मा जब भारत स्वतन्त्र भयो तब सयौको संख्यामा राज्यहरु रहेका थिए ।
धेरै राज्यहरुलाई भनिया,‘कि भारतमा मिल्नुहोस् कि पाकिस्तानमा । स्वतन्त्र राज्य भएर पनि बस्न सक्नुहुनेछ ।’
धेरैभन्दा धेरै राज्यका राजाहरुले उक्त प्रस्ताव माने र आफ्नो निर्णय गरे । तर, दुई तीनवटा राज्यको मुद्धा भने बाँकी रह्यो ।
एउटा थियो हैदरावाद । यस राज्यमा ठुलो संख्यामा हिन्दुहरुको संख्या रहेको थियो । तर शासक भने मुसलमान रहेका थिए । त्यस समय भारत सरकारले सैन्य बल प्रयोग गरेर हैदरबादलाई भारतमा मिसाउने काम गर्यो ।
काश्मिर– काश्मिरमा भने जनताहरु मुस्लिम थिए भने राजा हरि सिंह हिन्दु थिए ।
यस्तो अवस्थामा पाकिस्तान चाहन्थो कि काश्मिर पाकिस्तानमा गाभियोस् ।
तर, महाराजा हरि सिंहले काश्मिर कुनै पनि देशमा नगाभिने निर्णय गरे । स्वतन्त्र रुपमा काश्मिर राज्य रहने उनले निर्णय गरे ।
त्यसपछि रुष्ट बनेको पाकिस्तानले काश्मिरमा आक्रमण गर्यो । पाकिस्तानी फौजले कबाइलियोको भेषमा काश्मिरमा आक्रमण गरेको थियो । पाकिस्तानले आक्रमण गरेपछि काश्मिरका राज डराए । त्यस समय काश्मिरमा एउटा आन्दोलन चर्किरहेको थियो । नेशनल कन्फ्रेन्स नामक धर्म निरपेक्ष संगठनले आन्दोलन गरेको थियो । यो आन्दोलनको नेतृत्व नेताशेख अबदुल्लाले गरेका थिए ।
पाकिस्तानका कबाइलियोले आक्रमण गरेपछि काश्मिरका राजा हरि सिंहले दिल्लीमा आफ्नो दुत पठाए । भारत सरकारसँग निवेदन गर्दै भारतीय सेना काश्मिर पठाएर पाकिस्तानी सेनालाई पराजित गर्न आग्रह गरे ।
भारत सरकारले प्रस्ताव सुनिसकेपछि भन्यो,‘काश्मिर त एउटा स्वतन्त्र राज्य हो । कुन आधारमा हामीले भारतीय सेना त्यहाँ पठाउन सक्छौ । स्वतन्त्र राज्यमा सेना पठाउन हामी असमर्थ छौ ।’
यस्तो कुरा सुनिसकेपछि शेख अब्दुलाको निवेदनमा भारत सरकारको तर्फबाट पण्डित नेहरुलाई भने,‘हामी कुनै पनि हालतमा पाकिस्तानमा गाभिन चाहन्नौ । जसरी हुन्छ भारतीय सेना काश्मिर पठाउनुहोस् ।’
त्यसपछि भारत सरकार र काश्मिरका राजाबीच एउटा सम्झौता भयो ।
सम्झौता अनुसार काश्मिर भारतसँग मिल्ने तर पुर्ण रुपमा गाभिने छैन । काश्मिरलाई स्वयत्तता दिइनेछ । चार मुद्धालाई छाडेर काश्मिरका सबै मुद्धा काश्मिरको संसदले हेर्नेछ ।
चार मुद्धा जुन भारत सरकाले देख्नेछ यी यस्ता थिए– सुरक्षा, विदेश नीति, अर्थ नीति, संचार विभाग । यो सबै दिल्ली सरकारले देख्नेछ ।
अरु निर्णय भने काश्मिरको विधानले गर्ने सहमति भएको थियो ।
जब काश्मिरको भारतसँग मिल्यो सम्झौता अनुसार कश्मिरको आफ्नो संविधान हुने, आफ्नै शासनको राज्य तथा प्रधानमन्त्री समेत हुनेछन् ।
भारतको आफ्नो संविधान, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति भए झै काश्मिरको पनि आफ्नै संविधान, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति हुनेछन् ।
यो शर्तमा भारतको फौज काश्मिरमा पाकिस्तनी सेनासँग लड्न गएको थियो ।
दुई तिहाइ हिस्सा पार गर्दै भारतीय सेनाले पाकिस्तानी सेनालाई रोकेको थियो ।
जब दुई तिहाइ भाग काश्मिर भारतमा आयो भने एक तिहाइ भाग पाकिस्तानतर्फ रह्यो ।
त्यस बखत भारतका पहिलो गर्भनर लर्ड माउंटन बटनले सल्लाह दिए,‘हामी यो मुद्धा युनाइटेड नेशनमा लैजानेछौ ।’
युनाइटेड नेशनमा मुद्धा पुगेपछि युनाइटेड नेशनले भन्यो,‘काश्मिरको भारतमा बिलय वा पाकिस्तानमा गाभिने निर्णय पुर्व जनमत संग्रह गराउनु पर्नेछ ।’
जनमत संग्रहको प्रक्रिया भने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रावधानमा हुनेछ । जनमत संग्रह हुन सबैभन्दा पहिला भारतीय सेना र पाकिस्तानी सेना काश्मिरबाट हट्नु पर्नेछ । काश्मिरका जनताहरुलाई भारतमा बिलय हुने वा पाकिस्तानमा वा स्वतन्त्र रहने विकल्प दिइनेछ ।
सेना फर्काउने निर्ण पाकिस्तान र भारत सरकार दुवैले अस्वीकार गरिदिए । यसकारण काश्मिरमा हालसम्म पनि जनमत संग्रह हुन सकेको छैन । दुइ तिहाइ भाग जब भारतको मातहतमा थियो तब धारा ३७० मा रहेर काश्मिरलाई पुर्ण रुपमा भारतमा बिलय गराउन दबाब दिइनै रहे ।
यो कुरा बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्रीको रुपमा चुनिएर आएका शेख अब्दुलाहलाई लाग्यो काश्मिरको स्वयत्तता खत्तम गर्नेछ । यस आधारमा रहेर उनले चीन, अमेरिकासँग कुटनीतिक पहल सुरु गरे । भारत सरकारले यो कुरा थाहा पाएपछि उनलाई गद्धार धोषित गर्दै १७ वर्षका लागि जेलमा होल्यो । शेख अब्दुलाहा एक चुनिएका प्रधानमन्त्री थिए । चुनिएका प्रधानमन्त्रीलाई जेलमा हालेपछि काश्मिरका जनताले असन्तोष प्रकट गरे । यस असन्तुष्टिलाई विभिन्न पक्षले फाइदा लिने काम गरे । पाकिस्तान पनि एक प्रमुख हिस्सा यस असुन्तुष्टिमा सहभागि रह्यो ।
यस पश्चात भारत सरकारले काश्मिरमा निष्पक्ष चुनाव हुन दिएन । यसकारण काश्मिरका जनता झन् असन्तुष्टि हुँदै गए । सन् १९८० दशक पश्चात अफगानिस्तानका केही अलकायदाका मानिसहरु काश्मिरमा आए । केही पाकिस्तानका ट्रेड मिलिटेन्ट पनि काश्मिर आए । यसले काश्मिरमा सबैभन्दा ठुलो हिंसाको वातावरण बनायो । तीन प्रकारका आतंकवादीले काश्मिरमा आतंक मच्चाउने काम गरे । यसले भारतलाई झन् असुरक्षित बनाएको भन्दै भारतीय सेनाको संख्यामा उल्लेख वृद्धि गरियो ।
यसपछि अलगाववादमा आतंवादको रुप लिन थाल्यो । काश्मिरियत जुन काश्मिरको सभ्यता हो यो तीन सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ । १. वेदान्तको मुल्य, २.सुफी शिक्षा, ३. बौद्ध धर्मको सिद्धान्त । तर, १९८० को दशकमा आतंवादले चरम रुप लिन लाग्यो तब आतंकवादीहरुले काश्मिरी पण्डितहरुलाई यातना दिन थाले । त्यसपछि ठुलो संख्यामा उनीहरु जम्मु र अन्य क्षेत्रमा शरण लिन बाध्य भए । काश्मिरका मुसलमानहरुले पनि काश्मिर छोड्दै अन्त शरण लिन पुगे ।
उक्त घटना पश्चात काश्मिरका जनता दुई तरिकाले पिडित भए । ठुलो संख्यामा रहेका भारतीय सेना र आतंवादीहरुको निशानामा काश्मिरका जनताहरु परे । सन् २००२ मा निष्पक्ष चुनाव भएपछि भने काश्मिरमा केही आशाहरु जागे । तर, बिजेपीका नेता बिके सिन्हाले अमरनाथ यात्रालाई नयाँ बोर्ड गठन गरे र अमरनाथको यात्रालाई एउटा साम्प्रदायिकको नाम दिए ।
यसका कारण ती जागेका आशाहरु पनि मरेर गए । अमरनाथको यात्रा स्थानीय मुसलमानहरुले आयोजित गर्ने गर्थे । स्थानीय मुलमानहरुको हातबाट लिएर भारत सरकारले अमरनाथ बोर्डलाई जिम्मा लगाइदियो ।
सरकारले जंगलको जमिन अमरनाथ बोर्डलाई जिम्मा लगाइदियो । यसका कारण काश्मिरका जनताले पुनः असन्तोष जाहेर गरे । यही कारण पनि आज पनि काश्मिरमा हिंसाका घटनाहरु भइरहेका छन् ।
एजेन्सी । अफगानिस्तानमा गएको २४ घन्टायता ५६० जना कोरोना संक्रमित थपिएका जनस्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहीबार जानकारी दिएको छ ।यो समेत गरी बिहीबारसम्म यहाँ कोभिड १९ का संक्रमितको संख्या १३ हजार १६ पुगेको पन
एजेन्सी । रसियामा जुलाईमा आयोजना गर्न लागिएका ब्रिक्स र शाङ्घाई सहयोग संगठन (एससीओ) का शिखर सम्मेलनहरु स्थगित भएका छन् ।
हावाहुरीले विद्यालयका छाना उडाएपछि गुल्मीमा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा समस्या
गुल्मी । गुल्मीमा हावाहुरीले विद्यालयका छाना उडाएपछि क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका वडा नम्बर १ स्थित रातचौर प्राथमिक विद्यालयमा भारतबाट आउने १२ जनालाई व्यवस